ပရဟိတ: Masterpiece Uni Sans for Mac OS X
Masterpiece Uni Sans for Mac OS X
ကျွန်တော်ပို့စ်မတင်ဖြစ်တာတောင် တော်တော်ကြာသွားပြီ။ Opentype spec က ရေးဖို့စထားပြီး rule တွေ တကယ်ချရေးဖို့ ပြန်ကြည့်တော့ တချို့ဟာတွေ စိတ်တိုင်းမကျတာနဲ့ တော်တော်များများ အစကပြန်ရေးဖို့၊ မစဖြစ်သေးပြန်ဘူး။ မအားတာလဲ အတော်ကို မအားတာ။
ခုတလော Mac OS X (Snow Leopard) စမ်းဖြစ်နေတော့ ထုံးစံအတိုင်း ယူနီကုဒ်ဖောင့်ရေးချင်လာပြန်ရော။ AAT (Apple Advanced Typography) ကို စမ်းချင်တာလည်း ပါပါတယ်။ AAT က Re-ordering (AAT အခေါ်နဲ့ဆိုရင် Rearrangement) တိုက်ရိုက်ရတယ်ဆိုလို့ပါ။ တကယ်တမ်း AAT တို့ Graphite တို့ရဲ့ အဲဒီလို ဖောင့်ထဲမှာပဲ အားလုံးထည့်တာကို ပိုသဘောကျပါတယ်။ Opentype မှာ Re-ordering ကို Shaper engine က တာဝန်ယူတာ သိပ်အဆင်မပြေလှဘူး။ Linux နဲ့ Pango မှာ open source မို့လို့ shaper module ရေးနိုင်ပေမယ့် Windows မှာတော့ အဆင်မပြေလှပါဘူး။ တရားဝင်ပံ့ပိုးမယ့်အချိန်ကို ခုချိန်အထိ ထိုင်စောင့်နေရတာမျိုးပါ။
Rearrangement Morph ကို စမ်းနေတာ အဆင်မပြေသေးတာ ဒီနေ့မှ အဆင်ပြေသွားပါပြီ။ စမ်းကြည့်ပေးကြပါဦး။ ဒါပေမယ့် အားလုံးတော့မပြီးသေးပါဘူး။ ပါဌ်ဆင့်တွေရယ်၊ ကင်းစီး၊ ရရစ်၊ သဝေထိုး နေရာပြောင်းတာရယ်ပဲ ပြီးပါသေးတယ်။ ကမ္ဘာ့ဖလားကြည့်ဖို့ ထိုင်စောင့်ရင်း အားလုံးြပီးအောင်ရေးဖို့၊ မပြီးသေးတာနဲ့ ပြီးသလောက်ပဲ တင်လိုက်ပါတယ်။
အောက်မှာ မီးမြေခွေးနဲ့ ဝီကီပိဒိယကြည့်နေတဲ့ပုံပါ၊ ရရစ်အကြီးပြောင်းတာတို့၊ တချောင်းငင်အရှည်ပြောင်းတာတို့ မပြီးသေးတာမြင်နိုင်ပါတယ်။ အဲဒါတွေအားလုံးကတော့ opentype က rule တွေပြောင်းရေးလိုက်ပါပဲ။ အခုပို့စ်ရေးနေတာ TextEdit နဲ့ KeyMagic for OS X သုံးထားတာပါ။
Posted by တင်မျိုးထက် at 4:02 AM
Labels: AAT, Mac OS X
Anonymous October 7, 2010 at 1:34 AM
ဘယ္ပရုိဂရမ္ေတြ သုံးျပီးေရးလဲ။ ဘာေတြလုိအပ္မလဲ AAT အတြက္ သိခ်င္ပါတယ္။
တင်မျိုးထက် October 22, 2010 at 11:54 PM
We mainly use Apple Font Tools (http://developer.apple.com/fonts/osxtools.html). These are command line tools and you can find manual and tutorial at this link. Manual and tutorial are good enough to start developing.
We're planning to release soon and you can see the beta version at http://www.myanmaritpro.com/group/mmunicode/forum/topics/the-great-day-the-great. Please try and report any bugs.
VSKL November 15, 2010 at 4:13 AM
Hi bro, I replied in MMITPro.
How can I use Unicode for Iphone, pls reply me, thanks.
တင်မျိုးထက် February 7, 2011 at 2:18 AM
Here's the guide for jailbreak iPhone by Saturngod...
Talachan August 3, 2011 at 4:23 PM
AAT not support on Mac os X Lion right so Did you know how to get it on Lion